Kulan Looga Hadlayay Hormarinta Iyo Midnimada Oo Ka Dhacay Caabudwaaq. – DARYEELRELIEF
Kulan ay ka soo wada qeyb galeen bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa ka dhacay degmada caabudwaaq ee gobolka Galgaduud.
Munaasabadaan oo ay soo qabanqaabisey hay`ada daryeelrelief ayagoona ka qeybgaleen Culmaa`udiin, Waxgarad, Siyaasiin Haween iyo Dharanyaro ayaa waxaa ay ku soo gebigabowday jawi wanaagsan.
kulankaan oo soconaayay mudo labo maalin ah 26 ilaa iyo 27 Agosto ee 2015 ayaa waxaa looga hadlay arimo badan oo ay kamidyihiin: Midnimada, Nabadgelyada, Deriswanaaga, Isdhexgalka bulshada iyo Horumarinta iyo arimo kale oo badan.
Gudiga ka socday Hay`ada Daryeelrelief ee kulankaasi ku sugnaa ayaa waxaa ka mid ahaa Dr: Cabdiqaadir Sheekh Cabdi, Caaqil Maxamed Muuse (Sanweyne Gaanax) iyo Sheekh Cabdrisaaq Warsame Fiqi ayadoona mas`uuliyeentaan kala kala socday Gudaha iyo Dibada.
dadkii ka qeybqaatey kulan ayaa si wanaagsan u soo dhowaayay fikradaha iyo talooyinka ay u soo bandhigtey Hay`ada daryeelrelief waxaana ay sheegeen in ay soo dhoweyneyaan lana shaqaydoonaan ayagoona ka codsaday inay wax ka qabtaan adeega bulshada ay u baahantahay sida Waxbarada, caafimaadka iyo biyaha.
Gudoomiyaha gudiga shuurada ee Daryeelrelief Dr: Cabdiqaadir Sheekh Cabdi oo Halkaasi ka jeediyay hadalo wax u ool ah ayaa waxaa ka mid ahaa sidii xooga loo saari lahaa nabada iyo deris wanaaga, waxaana sidoo kale sheegay in la ilaaliyo wanaaga iyo kala dambeynta. Halkaan hoose ka doowo khudbadiisa.
Caaqil Maxamed Muuse (Sanweyne Gaanax) oo ah Xubin ka tirsan Hay`ada Daryeelrelief kana imaaday Dalka Australia asigoona Qeexey Hay,ada Daryeelrelief oo Sumadeedu tahay Midnimo iyo Waxqabad ahna hay,ad samafal oo ay soo qaban qaabiyeen inyar oo kadamqatey dhibaatooyinka iyo dib udhaca haysta bulshada kudhaqan deegaanada ay Midnimo iyo Waxqabad u istaagtey inay waxka qabtaa.
Sanweyne oo ah khabiir kuxeeldheer arimaha bulshada kana mid ah Xubnaha ugu firfircoon ee hay,ada Daryeelreleif ayaa bulshada u cadeeyey inaanay wax Magac,Maal iyo Mansab iyo Sumcad midna kaga dooneynin Umada ehelkooda waxa ay uqabanayaan balse keliya ay tahay inay laqeybsadaan dhibaatooyinka ragaadiyey Umada.
Wakiilka hay,ada daryeelrelief u jooga Gudaha Dalka ayaa isagana warbixino taariikhi ah isagoo adeegsanayey Gabay qiiro leh oo ku cabirayey hadafka kulanka laysugu yimid iyo qiimaha uu leeyahay iyo inaan fursada Midnimo iyo Waxqabad aan layska dayicin ee lagu fara adeygo.
Bulshada qeybaheeda kala duwan ee ka soo qeybgalay kulanka ayna soo dhoweeyay araada iyo fikirka hay`ada ay u soo Bandhigtay oo qaarkood hadlaasi ka hadlay ayaa waxaa ay ayana sheegeen in ay daryeelrelief garabtaaganyiin ay ka shaqeyneyaan hormarka deegaanka iyo bulshada waxaana hadaldooda ka daawan karta muuladaan hoose.